Kooxda Faca Weyn ee Real Madrid Ayaa Markeedii 12-aad Ku Guulaysatay Koobka Champions League-ga+SAWIRRO | Calanside
Kooxda Faca Weyn ee Real Madrid Ayaa Markeedii 12-aad Ku Guulaysatay Koobka Champions League-ga+SAWIRRO
Published on June 4, 2017 by amiin · No Comments Views
Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay koobka horyaalka Yurub ee Champion League kadib markii ay 4-1 ay ugaga badisay naadiga Juventus ciyaar final ahayd oo caawa ka dhacday magaalada Cardif ee Wales.
Ciyaar aad u adkeyd ayna labada koox soo bandhigeen xirfad ayaa 90kii daqiiqo kadib kooxda Real Madrid waxa ay noqotay mid taariiq cusub u dhigta koobkan iyadoo labo sano oo isku xigta ku guuleysatay kadib markii ay 4-1 uga badisay kooxda Juventus.
Kooxda Real oo 4-0 ku badisay ayaa weeraryahankeeda Ronaldo uu labo gool u dhaliyay halka labada gool ee kale ay kala dhaliyeen Casemiro iyo Marco Asensio, kooxda Juventus ayaa waxaa gool kaliya ay dhaliyeen oo ahaa mid aad u qurux badan waxaa u dhaliyay Mario Mandžukić.
Ciyaartan oo qeybteedii dambe aad u kululaatay ayaa waxaa la bixiyay 8 calaamadaha hurdiga ama digniinta ah iyadoo afar ka mid ah la siiyay ciyaaryahanada Juventus halka afar kalana ay qaateen ciyaartoyda Real Madrid hase yeeshee dhamaadkii ciyaarta ayaa waxaa karaka Cas la siiyay Juan Cuardrado oo ka mid ah ciyaartoyda naadiga Juventus. Waxayna kooxda Juve u noqotay mid aad u qalafsan waayo guud ahaan tartankii Championka ee sanadkan kulamadii ay soo safatay waxaa laga dhaliyay saddex gool oo kaliya halka kulankii Finalka lagu xaaqay afar gool.
Labo ka mid ah goolasha ay dhaliyeen kooxda Real Madrid ayaa ahaa mid aan si toos ah shabaqa u cuskan balse ay ku sii dhaceen ciyaartoyda kooxda Juve waxaana ka mid ahaa goolkii koowaad ee uu dhaliyay Ronaldo iyo goolkii labaad ee uu dhaliyay Casemiro.
Real Madrid oo sidoo kale ku guuleysatay koobka horyaalka dalka Spain ee La Ligaha ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee labo jeer oo isku xigta ku guuleysata koobka Champion League intii magacan loo bixiyay sidoo kale waxa ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee 12 jeer “La Duodecima” iyadoo weeraryahanka gooldhaliyaha ah ee Ronaldana uu dhaliyay goolkiisii 600aad.